SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မဇွန်လအစည်းအဝေးတွင် immersive VR ၏အနာဂတ် Explore မှ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » ဇွန်လအစည်းအဝေးတွင် immersive VR ၏အနာဂတ် Explore မှ SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မ
ဇွန်လအစည်းအဝေးတွင် immersive VR ၏အနာဂတ် Explore မှ SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မ
Los Angeles - အ ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မ SMPTE®, ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏အနာဂတ် defining အဖွဲ့အစည်း, Motion Picture ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံအကယ်ဒမီမှာ၎င်း၏လစဉ်အစည်းအဝေးကို, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 19 မှာအပြည့်အဝစွဲငြိဖွယ်ရာ virtual reality ၏ထွန်းစူးစမ်းမည်, Los Angeles မြို့.
Star Trek လူတွေကိုမယုံနိုင်လောက်အောင် lifelike holographic ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သော "holodeck," တစ်စိတ်ကူးယဉ် virtual reality (VR) စနစ်သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ပရိတ်သတ်တွေမိတ်ဆက်ပေးသည်။ အခုတော့တချို့နည်းပညာသမားတွေနဲ့အင်ဂျင်နီယာများ holodeck တစ်အဖြစ်မှန်စေရန်ကြိုးပမ်းနေကြသည်။ ဗတ္တိဇံဒစ်ဂျစ်တယ် Reality မဟာမိတ်အဖွဲ့ (IDEA) စွဲငြိဖွယ်ရာမီဒီယာ၏ဖမ်းယူခြင်း, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် display ကိုများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဂေဟစနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်အဖွဲ့ဟာ၏ non-အမြတ်မဟာမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်း၏ဇွန်လအစည်းအဝေးတွင် SMPTE ဟောလိဝုဒ် IDEA ၏အဖွဲ့ဝင်တည်ထောင်သူဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများမှကိုယ်စားလှယ်များက panel ကဆွေးနွေးမှုကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ holodeck ကဲ့သို့သောနည်းပညာတွေကိုတည်ဆောက်ဘို့မိမိတို့အစီအစဉ်များကိုဆွေးနွေးရန်နှင့် immersive မီဒီယာများ၏အနာဂတ်အဘို့မိမိတို့ရူပါရုံကိုဝေမျှပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ် Looking Glass စက်ရုံအနေဖြင့်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး holographic desktop ကိုခင်းကျင်းပြသတဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသရုပ်ပြပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
ရိုင်ယန် Damm, Visby ၏ CEO နှင့်တည်ထောင်သူ
ဒေါက်တာ Arianne မင်ဒရယ်, Ph.D, Cablelabs မှာကျောင်းအုပ်ကြီးဗိသုကာ / ဗီဒီယိုနှင့်စံချိန်စံညွှန်းနည်းဗျူဟာ
အလင်းကွင်းဆင်း Lab က Jon Karafin, CEO နဲ့တည်ထောင်သူ
အင်ဒရူး Cochrane, ဆုရ VR နဲ့စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကဒါရိုက်တာ
အန်သိုနီ Magliocco, ဖျော်ဖြေမှုနှင့်မီဒီယာနည်းပညာစျေးကွက်မှာ / စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒုဥက္ကဋ္ဌ, အစည်းအဝေးထုတ်လုပ်နေသည်။
ဘာ: SMPTE ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မဇွန်လအစည်းအဝေး
Topic: အဆောက်အဦးအမှန်ဆိုသည်ကား, immersive အတွေ့အကြုံများ: သင်သည် Holodeck အတှကျအဆငျသငျ့ရှိပါသလား
ဘယ်တော့လဲ: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 19, 2019 6: 30 ညနေ - Reception 7: 30 ညနေ - တင်ပြခြင်းနှင့် Panel ကိုဆွေးနွေးချက်
ကြိုတင်အစည်းအဝေးမှစတင်အချိန်ရောက်လာ ကျေးဇူးပြု. ; နှောင်းပိုင်းတွင်ဆိုက်ရောက်နေရာချပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဘယ်မှာ: Motion Picture ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ, Linwood Dunn ပြဇာတ်ရုံ, 1313 ဗိုစိန့်, Los Angeles မြို့,, CA 90028
SMPTE အစည်းအဝေးများအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ non-အဖွဲ့ဝင်များကကြိုဆိုကြသည်။
ဗတ္တိဇံဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံများမဟာမိတ်အဖွဲ့ (IDEA) အကြောင်း
immersive ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံများမဟာမိတ်တစ်ဦး 501c6 မဟုတ်ဘဲအမြတ်အစွန်းကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်, ထွန်းသစ်စအလင်းကိုလယ်နည်းပညာအပါအဝင်အားလုံး immersive မီဒီယာကို formats, ဖြေရှင်းကြောင့်မူပိုင်-အခမဲ့သတ်မှတ်ချက်များတစ် suite ကိုအတွက်ပန်းတိုင်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တူသောစိတ်နည်းပညာ, အခြေခံအဆောက်အဦများ, နှင့်ဖမ်းယူခြင်း, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, စွဲငြိဖွယ်ရာမီဒီယာများ၏ Display ကိုများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဂေဟစနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်လုပ်ဆောင်နေဖန်တီးမှုဆန်းသစ်တီထွင်သူများတစ်ခုမဟာမိတ်အဖြစ်အစေခံရန် IDEA ဖန်တီးခဲ့သည်။ immersivealliance.org/
Looking Glass စက်ရုံအကြောင်း
Glass ကိုစက်ရုံရှာနေ VR သို့မဟုတ် AR ဦးထုပ်မပါဘဲလူများ၏အုပ်စုများအတွက်အစစ်အမှန်လောကသို့ 3D ဒစ်ဂျစ်တယ်အာကာသ၏အသကျရှငျအပိုငျးပိုငျးဆောင်ခဲ့မည်အကြောင်း holographic display တွေ၏အသစ်တစ်ခုလူတန်းစားနဲ့စတင်ပြီး, အ holographic အနာဂတ်တည်ဆောက်ခြင်းထံအပ်နှံနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 2018 ၏နွေရာသီမှာတော့ကုမ္ပဏီယနေ့အထိတင်ပို့ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်တကွ, Looking Glass®, 3D ဖန်တီးသူများအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး Desktop ပေါ်မှာ holographic Display ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Shawn Frayne နှင့်အဲလက်စ် Hornstein အားဖြင့် 2014 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီတစ်ခု R & D နှင့်ဟောင်ကောင်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အတူဘရွတ်ကလင်း, New York မှာရုံးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေနေ Glass ကိုစက်ရုံပူးတွဲတည်ထောင်ကြောင်း Foundry Group မှ, Uncork မြို့တော်, Lux မြို့တော်, SOSV နှင့်မြောက်မြားစွာကောင်းကင်တမန်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော Vimeo နှင့် Makerbot အဖြစ်ကုမ္ပဏီများမှကျောထောက်နောက်ခံပြုနေပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.lookingglassfactory.com
အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မ SMPTE®အစပိုင်းတွင် 1928 အတွက်အနောက်ကမ်းခြေပုဒ်မအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ် SMPTE တိုင်းဒေသကြီး, က 1,200 ထက်ပိုလွှမ်းခြုံ SMPTE သာ. ကွီးမွတျအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်နည်းပညာအတွက်ဘုံအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်များ Los Angeles မြို့ ဧရိယာ။ အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မမှပွင့်လင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလစဉ်အခမဲ့အစည်းအဝေးများကမ်းလှမ်း SMPTE ရောနှောအဖွဲ့ဝင်များနှင့် Non-အဖွဲ့ဝင်များက။ အစည်းအဝေးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားရေးမှာပုဒ်မက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာတင်ထားလျက်ရှိသည် www.smpte.org/hollywood.
ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SMPTE လှံ & Arrows ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ တီဗီနည်းပညာ virtual reality	2019-06-13
ယခင်: Goldcrest Post ကိုရဲ့ရိုင်ယန်စျေး "သူမရဲ့အနံ့" တွင်ကိုယ်ပိုင်အဗဒ္ဒုန်၏အသံဖန်တီးလိုက်တဲ့
နောက်တစ်ခု: "Bosch ရဲ့" (ဆောင်းပါး3၏ 3) ၏မျှော်နှင့်အသံ